ဘီလူးရွှေကြိုင်ငသိန်းလှိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဘီလူးရွှေကြိုင်ငသိန်းလှိုင်	10
Posted by အာဂ on Mar 6, 2015 in Creative Writing, History | 10 comments
မိ ရွှေသိန်းအောင် နင့်ကို ကနေ့ တော်တော် တင်းသွားပြီ။ နင့်လုပ်တွေ နင်ကြည့်လေ။အစက ကောင်းမလိုလိုနဲ့ ။ ကောင်မ ။နောက်ဆုံး နင့်အမေမိကြိုင်လိုပဲ ရပ်ကွက်ထဲလူလည်ခေါင်မှာ နင့်လင်ငယ်တွေ ခေါ်ပြီး နင့် စောက်ရှက်မရှိ နင် ၂၀၁၅ မှာ နင့်လင်တို့ တသိုက် ရွှာ သူကြီးမြဲဖို့များ ဟယ်။ လုပ်ရက်ပ။ အံသြ ပါ့အေ။ သာအေးတို့ အုပ်စုက ရွာ ကျောင်းဆောက်ဖို့ ပြောတော့ နင်တို့အေးအေးလူလူ လက်ခံပါလား။ သူတို့ တောင်းနေတာ နင့် ရွာကလူတွေ စာတတ်ဖို့လေ။ နင့်တို့ လင်မယား တွေ ရွာထဲပြည်သူ တွေဆီက ကောက်ထားတဲ့ ထဲကမှ ပညာရေး အတွက် ဟယ် ဘာလဲ ငါလည်းမပြောတတ်ဘူး။ အော် နင်တို့ ငါ့တို့ ရွာ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အခုသုံးနေတာထက်တော့ နည်းတာတော့သေချာတယ် အေ။ အော်သိပြီ ကာကွယ်ရေး။ ကျန်းမားရေး။ ထားပါတော့အေ။ တစ်ပိသာ မှာ မှ၂၀ ကျပ်သားလောက်ပိုပေးဖို့ တောင်းနေတာလေ။ နောက်မိုဆို ငါတို့ရွာ က ဘေးကရွာတွေလို ဘာလည်း စာမတတ်တော့ မတိုးတက်တော့ဘူးပေါ့အေ ။
အဲ့ဒါကို နင်ကပဲနားမလည်တာလား။ နင့်လင်နဲ့ နင် ရာထူးမြဲ ဖို့လားမသိဘူး။ ကောင်မ နင်အချိန်ဆွဲ ပြီး အင်တင်တင်လုပ်နေတယ်။ဟော သာအေးတို့ အုပ်စု တွေများပြီး ရွာပညာရေးအတွက် တောင်းဆိုတာတွေ များ လာတော့ ညည်းလင်နဲ့ ညီး တိုတွေ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်လေးဘာလေးနဲ့ ရွာ အသုဘမှာ ဖဲလိမ်ရိုက်သလို ညီးတို့ တစ်သိုက် ဟိုလှည့် ဒီလှည်လုပ်နေသေး။ ပြီးတော့ သဘောတူတယ် ဘာညာဘာညာနဲ့ပေါ့ ညီးတို့ ပြောပေါ့။ အဲတော့ တစ်ရွာလုံး လျောက်သွား ပြီး ၂၀ ကျပ်သား ။ ရအရေးဘာညာ တောင်းဆိုနေတဲ့လူငယ် တွေ ရွာနားက လက်ပန်ပင်တန်း ရောက် တော့ ညီးတို့ က စောက်ချိုးပြောင်းပြီးပေးမဝင်လေ။ ရွာကညီးနဲ့ ညီးလင်သူကြီးလက်ဆွဲ ဖဲသမား။ အရက်သမား။ ဆေးသမားတွေ။လူမိုက်တွေကို တားခိုင်းတယ်ဆို။ ဖြစ်ချင်တော့ သာအေးတို့ ကိုအဲလိုတားတာကို စိတ်ပူတဲ့ ရွာ ထဲကလူတွေ က သာအေးတို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ ဆိုပြီး ညီးတို့ ကိုရွာရိုးကိုးပေါက် လှည့်ပြောတော့ ညီးတို့ မခံရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး။ ညီးတို့ မွေးထားတဲ့ ချီးစားခွေး တွေကို လည်ပတ်အနီတွေပတ်ပေးပြီး ။ ထမိန်ရေအဝတိုက်ကာ ကိုက်ခိုင်း။ ရှူးတိုက်ပေါ့။ အဲ့ခွေး တွေကလည်းဟယ် အရင် ဘုန်းဘုန်း ဘုရားတွေ ကို ညီးတို့ စော်ကားလို့ လမ်းထွက်လျောက်နေတုန်း ကိုက်ခိုင်းတဲ့ ကောင်တွေလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ မျိူးဆက်တွေလားပဲ။ ကနေ့ငါမြင်ရတာကတော့ ခွေးသားပေါက်တွေများတယ် ။ ခေါင်းဝါကောင်တွေရော။ခေါင်းစိမ်းတွေရောပဲအေ။ခွေးအိုတွေရော။ စုံပ။ ထမိန်ရည် ဘယ်လောက်ဖိုး သောက်ရလို့လဲတော့ ငါလည်းမသိဘူးအေ။ ကိုက်တာများ မြန်ပ ရွာလည်ခေါင်ကြီးမှာနော့်။
အေးအေး နောက်ပြောချင်တာတစ်ခုက ညီးလုပ်ကွက် တွေ ရိုးတယ်ဟယ်။ ညီးဘေးမှာ ရွာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ လူတွေရှိနေတာကိုဟယ်။ ညီး ၂၀၁၅မှာ ညီးလင် သူကြီးမဖြစ်မှာစိုးရိမ်လွန်လွန်း။ဟိုးမြို့ကလူကြီးတွေ တောင် သင်တန်းတွေတောင်ပေးထားတာဟယ်။တို့ရွာနား က ဦးတရုတ်တောင် ရေပန်းကားဆိုလားလှူထားတာကိုဟယ်။ခွေးနဲ့ရှူး တိုက်ကိုက်ခိုင်းတာအံသြပဟယ်။ ညီတို့ အဲစောက်ချိူး နဲ့ အကွက်တွေဆင်မနေနဲ့
မိရွှေ်းစိန်အောင် ရယ် ။ ညီးမကောင်းကြောင်းတွေဆက်ရေးရရင် ကျုပ်ရွာကနေ ခြေတစ်လှမ်းစာ တစ်လုံးကျ ရေးရင်တောင် လပေါ်ရောက်တဲ့ အထိပြီးမှာ မ ဟုတ်လို့ဒီလောက်နဲ့ တော်သေးပြီအေ။
ညီးရဲ့ ခွေး အကိုက်မခံရသေးတဲ့
မိဂ ။ About အာဂ
Alinsett@Maung Thura says: ဒီဖြစ်ရပ်ကို ပုံစံ မျိုးစုံလေးတွေနဲ့ ခံစားချက်ထောင့်စုံကနေ…(ရေးနိုင်သူတွေ) ရေးကြစေချင်နေတာ…
ရသနဲ့ ခံစားချက် ထိထိရှရှ ကျန်ခဲ့အောင်…
naywoon ni says: ​သွေးဆူ​နေတုန်းဒီအချိန်​မှာ ​ရေးမပြချင်​​သေးဘူး ဖတ်​သူပါ ​ဒေါသ သင့်​မှာစိုးလို့ :D
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကိုကိုဝီ ကယ်​မ​တော်​မူပါဖျား
မြစပဲရိုး says: ဂဂ ရဲ့
ဒီ အစိုးရမင်းများ ဆီက ဘာကိုများ ကောင်းတာ မျှော်လင့်နေလို့လဲ။
အများစု ထိပ်ပိုင်း များ ကိုတော့ လုံးဝ မယုံပါ။
သူတို့ စည်းစိမ် တွေ ကို အသေ ကာကွယ်ရတော့ မဲ့ အခြေအနေကိုး။
အရီး က တော့ သူတို့ထဲ က တစ်ချို့ ဆီကတော့ အများကြီး ကို မျှော်လင့်ထားတယ်။
အဲဒီ သူ တွေ ဘာမှ လုပ်လို့ မရ အောင် အပြင်က တစ်ချို့ သွေးထိုး နေတာ မမြင် ကြ တာ တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
အခုတော့ တားမရ စီးမရ နဲ့ ကံ ကိုသာ ပုံရတော့ မဲ့ အခြေဘဲ။
ခင်ဇော် says: စိတ်နောက် တိုင်ပင်မပါဖို့ အရေးးး
ငါဘာမှ မပြောဘူးးး ဂဂ
သူတို့ တောက်တုံးးး မကျတာပြောရရင် အချိန်တိုင်းးပြောနေရမှာမို့
Wow says: နောက်ဆို နာတောက်ညစ်ကပ်သူချိရင် ပေါမယ် အာ့မိုးရေးပေး ဘီဘီတ၀တိုက်မယ်တိရား… ကွက်စတိစ် ဟိ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: ပြောမပြောပေါင် တောသုံးတောင်အေ… ဒါတွေ ပြောရင် ဒေါတွေပါမှာစိုးလို့
ပြောကို မပြောချင်ဘူး ….
ဦးကြောင်ကြီး says: ကအာဂ.. နိကို ရွာဒဲက ဆိတ်စွမ်းအားရှင်ဒွေက ဒေါ်စု သမတမဖြစ်ဖို့ အာရုံလွှဲတဲ့စာရေးလို့ သိပ်မုန်းနေဂျဒယ်..။ စစ်ဗိုလ်သာ အဘခေါ်တာ နိဂိုဒေါ့ လဒဒဲ့.. အဖျက်သမားဒဲ့.. ကျောင်းသားကို မြှောက်ပေးနေသူဒဲ့… ဒင်းရို့ဂ ဒင်းရို့က
အာဂ says: အငီး ကမန့်တွေအားလုံးကနီပါကောလား..။ ရွာထဲမယ်စွမ်းအားရှင်တွေ တော်တော်များနေပြီဆိုတဲ့ သဘောနဲ့တူတယ်။ ဟောဟောပြောရင်းနဲ့ ကျနော့်အခုရေးထားတာလေးလည်းနီတော့မယ်။
Mike says: .အင်း..ဂဂ ရဲ့ ဒီစာလေးဘာလို့မဖတ်ဖြစ်လိုက်မှန်းမသိ…ခုဖတ်ကြည့်တော့မှ ဒိတ်အောက်နေပြီ..
.ဒါကြောင့်မမန့်တော့ဘူးကွာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.